Raadin Raadin, Kaalinta Labaad Kaliya Waa Khasaaraha Koowaad | Martech Zone
Sabti, Noofembar 7, 2009 Sabti, Noofembar 7, 2009 Douglas Karr
Qaar ka mid ah dadka waawayn way ku farxaan markay bilaabaan inay arkaan boggooda waxay bilaabaan inay muujiyaan natiijooyinka mashiinka raadinta. Shirkado aad u tiro badan ayaan ogaanin inta ay le'eg tahay ciyaarta iyo inta lacag ee halista ku jirta marka ay timaado qiimeynta ereyada muhiimka ah iyo qiimaha meelaynta mashiinka raadinta.
Marka… waa kan tusaale meesha aan ku qiyaasi karo qiimaha darajada. Aynu qiyaasi karno inaan nahay wakiilka guryaha ee 'San Jose Real Estate' waxaanan leenahay baloog weyn iyo ololeyn suuq geyn mashiin raadin ah oo kor noosii qaadaya muddada Guryaha San Jose ee Iibka.
Bishii la soo dhaafay, waxaa jiray 135,000 raadin Guryaha San Jose ee Iibka.
Qiimaha dhexdhexaadka ah ee guri iib waa $ 544,000 oo ku yaal San Jose.
Guddiyada guryaha 'Real Estate' waxay udhaxeeyaan 3% iyo 6%, markaa aan qiyaasno 4% heerka dhexdhexaadka guddiga.
Aan hadda ka fikirno in kaliya 0.1% baarayaashu ay sababeen iib dhab ah.
Baaraha SEO ayaa xoogaa bixiyay tirakoobka darajo iyo jawaab, markaa aan xisaabta qabanno oo xisaabino guddiyada booska 8 ee bogga, illaa booska # 1 ee bogga natiijooyinka mashiinka raadinta:
Hadda, Trulia haya jagada # 1 iyo Zillow wuxuu hayaa booska # 2 - maahan wakiilada guryaha. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ah in si fudud loo xajiyo booska # 1 Trulia waxay haysaa 56% oo ka mid ah qasabadaha baaritaankaas - qiyaastii $ 41 bilyan oo raadin Real Estate ah hal magaalo. Zillow wax yar ayey ka hooseysaa $ 10 bilyan. Waqtiga aad tagto wargayska, Mercury News, waxaad ka hooseysaa $ 3 bilyan.
Waxaan la yaabanahay sababta ay wakiilada iyo dilaaliinta gobolka ay ugu ogolaanayaan tusayaashaan inay guuleystaan… iyagu waayeen tartamayaa halkii aad ku tiirsan lahayd iyaga. Miyaanay u qalmin mid ka mid ah dilaaliinta gobollada inay ku bixiso dhowr milyan oo doolar suuq-geynta mashiinka raadinta? Haa… haa waa maya.
Trulia waxay ku guuleysaneysaa 4 jeer taraafikada hal ereygan muhiimka ah! 4 jeer! Markaad qiimeyneyso shirkadaha mashiinka raadinta iyo la-taliyayaasha, ha dhaafin xaqiiqadan. Maskaxda ku hay in ay bilaabeyso inay aad qaali u noqoto in lagu tartamo shuruudahaan tartanka iyo raadinta mugga sare leh, in kastoo. Waxaan la shaqeyneynaa macmiil muhiim ah hadda waxaanna ku riixeynaa bogga natiijooyinka mashiinka raadinta. Waxaan u baahannahay inaan helno # 1 baro iyaga loogu talagalay ololeyaasha si ay si buuxda u bixiyaan oo ay noo siiso shaqo dheeri ah. Saamiyayaashu waa weyn yihiin oo halkaas ayaan gaari doonnaa - laakiin waxay qaadanaysaa dadaal badan.
Shirkado badan ayaa ku faraxsan markay ku jiraan bogga koowaad mistake qalad weyn. Kaliya kuma filna in la muujiyo ereyada muhiimka ah ee natiijooyinka mashiinka raadinta - ku guuleysiga raadintaas ayaa fure u ah guuleysiga ganacsiga iyo doolarka ka dambeeya raadintaas. Ku billow xisaabinta soo noqoshada maalgashiga ereyadaada muhiimka ah, saamigaaga dhow, iyo dakhligaaga. Waxaad ogaan kartaa inay si fiican ugu qalanto boqolaal kun oo doollar istiraatiijiyado suuq-raadis ah. Haddii aadan taas garwaaqsan - waxaa laga yaabaa in tartankaagu uu sidaas sameyn doono.
Siduu Aabbahay ii sheegi jiray… “Kaalinta labaad uun baa khasaaray".
Tags: Brian Goffmangeesranksidee loo qiyaasaa kloutawood sir ahbulshadasocialbropro
Nov 8, 2009 saacadu markay tahay 9:24 PM
Well Said - himilada ugu dambeysa ee degel kasta ama shirkad suuqgeynta mashiinka raadinta waa in lagu gaaro # 1. Taasi waa meesha lacagta badani ku jirto…
Nov 9, 2009 saacadu markay tahay 5:48 PM
Farqiga u dhexeeya # 1 iyo # 2 aad ayuu uga weyn yahay sidii aan filayay.
Waxaan la yaabanahay haddii tani ay sii ahaan doonto mid joogto ah ama haddii macaamiisha ay bilaabi doonaan inay xoogaa hoos u sii qoddaan marba haddii uu suuqa xoogaa bislaado